Friday May 07, 2021 - 13:34:06 in Wararka by Xarunta Dhexe
Shirkadda dekadaha ee fadhigeedu yahay Dubai ee DP World iyo Wasaaradda Gaadiidka ee Itoobiya ayaa kala saxeexday heshiis lagu horumarinayo jidka isku xira Itoobiya iyo Berbera ee Somaliland oo maraya marin ganacsi iyo saad.
DP World iyo la-hawlgalayaasheeda waxay qorsheynayaan inay maalgashi gaaraya $ 1 bilyan oo dolar inay ku bixiyaan 10-ka sano ee soo socota si ay u horumariyaan kaabayaasha saadka ee marinka, shirkadda ayaa ku sheegtay hadal ay soo saartay Khamiistii.
"Mashruucan ayaa waxaa ka mid noqon doona dekedo qalalan, bakhaarro, deyrarka konteenarada, bakhaarro qaboojiye leh iyo xamuul u gudbinta iyo howlaha nadiifinta,” ayay tiri shirkadda.
Heshiiska waxaa Addis Ababa ku saxiixay Khamiistii Dagmawit Moges, Wasiirka Gaadiidka ee Itoobiya iyo Sultan Bin Sulayem, guddoomiyaha iyo madaxa fulinta ee Shirkadda DP World.
"Waxaan rumaysanahay in horumarinta marinka Berbera oo laga dhigo mid ka mid ah marinnada waaweyn ee ganacsiga iyo saadka ay furi doonto faa’iidooyin dhaqaale oo aad u weyn oo ay u leedahay Itoobiya ayna taageeri doonto qorshayaasheeda horumarineed ee hanka leh,” ayuu yidhi Mr Bin Sulayem.
Waxay abuuri doontaa shaqooyin cusub, waxay soo jiidan doontaa ganacsiyo cusub iyo maalgashi marinka, iyo sidoo kale inay ballaariso oo ay xoojiso marinka dalku u leeyahay ganacsiga caalamiga ah iyadoo la helayo xiriir toos ah, bilaa sumad ah oo hufan oo u dhexeeya Itoobiya iyo Dekedda Berbera.
Heshiiska DP World ay la gashay dowladda Itoobiya wuxuu soo jeedinayaa in labada hay’adood ay dhisaan shirkad wadaag ah oo dhanka saadka ah si ay u fuliso howlaha saadka min asal ilaa meeshii loo socday.
Shirkadda DP World ayaa bixin doonta adeegyo dhoofineed oo asal ahaan ka soo jeeda Itoobiya illaa Dekedda Berbera. Waxay sidoo kale bixin doontaa adeegyo soo dejin ah oo laga soo dejin doono dekedda rarka illaa la keenayo shixnadaha, ayaa lagu yiri qoraalka.
Wasaaradda gaadiidka ee Itoobiya ayaa dib u eegis ku samayn doonta isla markaana xallin doonta caqabadaha xagga sharciyeynta ee dhinaca Itoobiya ee marinka Berbera Corridor si loo fududeeyo howlaha habsami u socodka ee shirkadaha saadka, ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka.
Itoobiya waxay sidoo kale ka hirgelin doontaa kaabayaasha IT-ga iyo teknolojiyad casri ah marinka si loo hubiyo wareejinta xamuulka oo ammaan ah.
Hawlwadeennada dekedaha waxay ballan-qaadeen inay maal-gashan doonaan illaa $ 442 milyan oo lagu horumarinayo laguna ballaarinayo Dekedda Berbera, iyadoo wejigii koowaad lagu dhowaaday in la dhammaystiro Shaqo dheeri ah ayaa socota oo ku saabsan balaarinta buundada ilaa 1000 mitir, taas oo kordhin doonta awooda 2 milyan oo TEUs ah (labaatan cagood oo u dhiganta), oo ay ku shaqeeyaan 10 wiish.
Wadada isku xiri doonta Dekedda Berbera iyo Wajaale ee xadka Itoobiya, oo ay maalgelinayso Sanduuqa Abu Dhabi ee Horumarinta iyo Waaxda Horumarinta Caalamiga ee Boqortooyada Ingiriiska, ayaa la filayaa in la dhammaystiro dhammaadka sannadka 2021, ayaa lagu yiri qoraalka.
Qalalaasaha Israa'iil iyo Qasa: Isbarbardhigga awoodda militari ee Israa'iil iyo Xamaas
20/05/2021 - 20:44:10
Dowlada Itoobiya oo xad gudub kale kula kacday Tigreega
12/05/2021 - 19:30:45